Ukwethulwa kwe-Android Wear 2.0 kulethwa phambili ngosuku olulodwa: Februwari 8 | Izindaba zamagajethi
Ukwethulwa kwe-Android Wear 2.0 kusasele usuku olulodwa: Februwari 8
Abaningi cha, abasebenzisi abaningi abalinde njengamanzi ngoMeyi ukwethulwa kwenguqulo yokugcina ye-Android Wear 2.0, inguqulo ezoletha inani elikhulu lezici ezintsha ngokuqhathaniswa nenguqulo yamanje futhi iGoogle efuna ngayo yenza ama-smartwatches aphethwe yisistimu yayo yokusebenza ye-Android Wear ezimele kancane. Emasontweni ambalwa edlule sike sananela i-tweet evela ku-Evan Blass lapho athi khona i-Android Wear 2.0 izongena emakethe ngoFebhuwari 9. U-Evan ungumthombo, singaba nokungabaza okumbalwa ngakho. Kepha ngokusobala lolu suku selwedlulile, ngolunye usuku luyoba ngqo. Kuzoba ngoFebhuwari 8 lapho kukhishwa inguqulo yokugcina futhi izokwenza kanjalo kanye nezinhlobo ezimbili ezintsha zama-smartwatches e-LG. Lolu suku olusha nalo luqinisekiswe ngu-Evan Blass uqobo.
Kuwo wonke unyaka odlule zimbalwa kakhulu izinhlobo ezintsha ezethuliwe emakethe, ngokwengxenye ngenxa yokubambezeleka kokwethulwa kwe-Android Wear 2.0, ukubambezeleka okuholele ekushiyweni kwabanye babakhiqizi bayo abakhulu, njenge-Motorola, okushiya lesi sigaba sibanjiwe size sithele kakhulu. Kepha ngaphezu kokubambezeleka, kufanele futhi sikhumbule ukuthi isibuyekezo esihle se-Android Wear sihambisana nawo wonke ama-terminals asemakethe, ngoba amadala kunawo wonke njenge-Moto 360 yokuqala azosala ngaphandle kwawo.
Phakathi kwezinto ezintsha ezisizosinikezwa yi-Android Wear 2.0, siyathola isitolo sakho sohlelo lokusebenza, esizosivumela ukuthi sithole izinhlelo zokusebenza ezikhethekile ze-Android Wear yethu ngendlela esheshayo nelula. Kepha ngaphezu kwalokho, iGoogle ibisebenza futhi ukuze ama-smartwatches afakwe uhlelo lwayo lokusebenza angasetshenziswa ukwenza izinkokhelo, njengoba kungenziwa nge-Apple Watch selokhu yethulwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Ukwethulwa kwe-Android Wear 2.0 kusasele usuku olulodwa: Februwari 8
La mabhange akukhonza ngeWhatsApp uma uyidinga
Imishini yokuthengisa kaMcDonald ilapha